वातावरणीय Ryokai LED पानी भित्र प्रकाश समारोह र नियन्त्रण
प्रकार बढी नाजुक र नरम। बी ...
LED ग्राउंड बत्तीहरू बत्तीहरूका लागि लागू उत्पाद चयन
ग्राउन्ड / रेसेस्ड बत्तीहरूमा एलईडी अब पार्क, ल्यान, वर्ग, आंगन, फूल बेड, र पैदल यात्री सडकहरूको सजावटमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जे होस्, प्रारम्भिक व्यावहारिक अनुप्रयोगहरूमा, एलईडी गाडिएको बत्तीहरूमा विभिन्न समस्याहरू थिए। सबैभन्दा ठूलो समस्या वाटरप्रूफ समस्या हो। ग्रिडमा एलईडी ...
सही LED प्रकाश स्रोत कसरी छनौट गर्ने
जमिनको प्रकाशको लागि सही LED प्रकाश स्रोत कसरी छनौट गर्ने? उर्जा बचत र वातावरणीय संरक्षणको लागि बढ्दो मागको साथ हामी भू-प्रकाश डिजाइनको लागि एलईडी बत्तीहरू प्रयोग गर्दैछौं। एलईडी बजार हाल माछा र ड्रेगनको मिश्रण हो, राम्रो र बा ...
ल्याण्डस्केपको एक महत्त्वपूर्ण अंशको रूपमा
ल्यान्डस्केपको महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा, आउटडोर ल्याण्डस्केप लाइटिंगले केवल परिदृश्यको अवधारणा मात्र देखाउँदैन यो विधि रातको समयमा मानिसका बाहिरी गतिविधिहरूको अन्तरिक्ष संरचनाको मुख्य अंश पनि हो। वैज्ञानिक, मानकीकृत, र प्रयोगकर्ता मैत्री आउटडोर ल्याण्डस्केप lighti ...